နေအိမ် » Tools များ hack » WIFI Password ကို Hacker က 2018 – Wi-Fi ကို Password ကို Hack တဲ့ Tool ကို
WIFI Password ကို Hacker က 2018 – Wi-Fi ကို Password ကို Hack တဲ့ Tool ကို
အားဖြင့် Anastasiya Libra | ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2018
Wi-Fi Password ကို Hacker က Download လုပ် 2018 အခမဲ့
စျေးကွက်အပေါ်လျင်မြန်စွာရှာတွေ့ software ကို hacking အများအပြား Wi-Fi password ကိုရှိပါတယ်, တအင်တာနက်ထဲကနေသူတို့ကိုအလွယ်တကူဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်. ယခုအခါအသုံးပြုသူများအတွက်အများကြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ကိစ္စအကောင်းဆုံးဘယ်ဟာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်. sactivator.com အကောင်းဆုံး Wi-Fi password ကိုဟက်ကာသည် 2018. သငျသညျမသာနိုင်ကုန်ကျစရိတ်အခမဲ့ Download ပြုလုပ်. ဒါပေမယ့်လည်းသင်တို့အဘို့သေချာသင်သည်များစွာသောအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့များကိုမည်သည့်၎င်း၏န့်အသတ် features တွေခံစားနိုငျ. ဒါဟာအများအပြား hack က tools တွေကိုဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေခဲ့, ထိုသူတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ဟုဆိုထားပါသည်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အသုံးပြုမှုမှကြွလာသောအခါ, များစွာသောပြဿနာများကိုတှေ့နိုငျပါသညျ. သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် အားလုံးထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များမှသင်တို့ကိုကယ်ဆယ်ရေးသည်.
Wi-Fi ဟက်ကာများ 2018 Wi-Fi hack နှင့်အသုံးပြုမှုအောင်က၎င်း၏လျှို့ဝှက် password ကိုချိုးဖျက်ဖို့အသုံးပြုနှငျ့သငျနိုင်စွမ်းသောနောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်. မိုဘိုင်းအတွက် wifi password ကိုဟက်ကာဆော့ဖ်ဝဲကိုအခမဲ့ download သင်တို့အဘို့အပွင့်လင်းသောမည်သည့် Wi-Fi အသင်းအဖွဲ့မှသင်တို့အဘို့အပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏. ဒါဟာသူ့ရဲ့ password ကိုအသုံးပြုခွင့်ရတဲ့အားဖြင့်သင်တို့အဘို့အ Wi-Fi connection ကိုအာဏာသောသင့်လျော်သောဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်. ဆော့ဖျဝဲ၏နံပါတ်များရှိပါတယ် လက်လှမ်း ဒီအတွက်ကြောင့်. သို့သော်, wifi hacker ကစကားဝှက်ကိုမဆို Wi-Fi password ကို hacking များအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်.
ဒါဟာဖြစ်ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ Laptop ကိုချိတ်ဆက်မှုအတွက်အခြားမည်သည့်တစ်ဦးချင်းစီ wifi password ကိုဟက်ကာဆော့ဖ်ဝဲကိုအခမဲ့ download သုံးစွဲဖို့အတော်လေးခဲယဉ်းသိအဖြစ်. သို့သော်, wifi hacker က password ကိုဆော့ဗ်ဝဲနဲ့သင်တစ်ဦးလမ်းပိုင်းတာခြင်းမရှိဘဲပိတ်မိနေတဲ့မရှိဘဲတစ်စုံတစ်ဦးကိုတခြားဆက်ဆံရေးမျိုးကိုသုံးနိုင်သည်. ဒါဟာမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်အလုပ်လုပ်တဲ့င်, လက်တော့ပ်, ထုတ်ကုန်, Android နဲ့ Windows PC ကို.
Wi-Fi Hacker က APK, 100% အိမ်နီးချင်းရဲ့ Wi-Fi ကွန်ယက်ကိုဖေါ်ထုတ်ဖို့ (အကောင်းဆုံး Android APP ကို)
သငျသညျ WIFI ကိုသင်မရရှိနိုင်ရှိရာအချို့သောအရပ်ဌာန၌နေသောဖြစ်နိုင်သောကြောင့်, ဒါကြောင့်သင်ဝိုင်ဖိုင် Hacker က Apk ကြိုးစားပါသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ device ကိုအဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းဖမ်းယူဖြစ်ပါတယ် WI-Fi password ကို hack ဖို့လိုအပ်. သငျသညျအခြို့သောထူးဆန်းတဲ့ရာအရပျ၌ရှိကြ၏နှငျ့သငျပျင်းလာပြီနေတယ်ဆိုရင်, သင်ကသင် Wi-Fi ကိုလက်လွတ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်ထို့နောက်အင်တာနက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအိမ်နီးချင်းကနေတချို့ကို Wi-Fi ကိုပ္ပံနေရာချထားလိမ့်မည်, သင်မူကား, အဲဒီစကားဝှက်ရဲ့မသိရပါဘူး. ယခုငါတို့ကဲ့သို့အမည်ရှိ app ကိုအတူသင်တို့ပေးအပ်ကြသည်စိတ်ပူစရာဘာမှမရှိဘူး အန်းဒရွိုက်အကောင်းဆုံး Wi-Fi Hacker က APK, 100% အိမ်နီးချင်းရဲ့ Wi-Fi ကွန်ယက်ကိုဖေါ်ထုတ်ဖို့. စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာကိုထိရောက်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိမတူကွဲပြား Android ကို Wi-Fi hacking ပရိုဂရမ်ရှိပါတယ်, တခြောဝဘ်မှသူတို့ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်. ယခု Android ကိုအကောင်းဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ အများကြီးကိုယ်ချင်းစာကပါဝငျ ထို client များဆီသို့ဦးတည်. Sactivator သင်တို့အားအကောင်းဆုံး Android Wifi Hacker က Apk ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်. သင်ရုံစရိတ်၏ကအခမဲ့ download လုပ်မရနိုငျ.
ထို့အပြင်, သင်တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲအန်းဒရွိုက်၏မြောက်မြားစွာအားသာချက်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုပြင်ဆင်တံ့သော၎င်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအများဆုံးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် Android wifi-password ကိုဟက်ကာများ၏အဓိက features တွေ 2018 အခမဲ့ download, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော. setup ကို Download လုပ်နှင့် / key ကို crack လည်းရရှိနိုင်ပါသည်. အိမ်နီးချင်းများ၏ wifi password ကို crack ဖို့, သင် password ကိုချိုးဖျက်ဖို့လိုအပ်. သငျသညျကို Android သို့မဟုတ်စနစ်များကိုအသုံးပြုနေသည်ဘာပဲ, ဒီမှာကျနော်တို့ password ကိုနှိမ်နင်းအတွက်အကူအညီပေးနိုငျသောအကောင်းဆုံးအဆော့ဗ်ဝဲနဲ့သင်ပေးနေကြတယ်. ဤဖြစ်စဉ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောဖွစျလိမျ့မညျ, တနည်း, မည်သည့်ပြဿနာဖြစ်သည်. ဒါဟာသင်အပြည့်အဝလုံခြုံရေးစနစ်ကပေးနှင့်ဘယ်တော့မှမည်သူမဆိုသင် password ကိုအက်ကွဲနှင့်ထိန်းချုပ်သည်ကိုသိရကြကုန်အံ့နှင့်ကို Wi-Fi ကို အသုံးပြု. လိမ့်မည်. သင်တို့သည်လည်း PC အတွက် wifi hack က app ကိုသုံးနိုင်. ဟုတ်ကဲ့, သငျသညျစိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပေမယ့်ကိုယ့်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာနှင့် wifi password ကို hacker က APK download, ပျော်မွေ့. သငျသညျရှိမဆိုကြိုးစားအားထုတ်မှုစေရန်မလိုပါဖြစ်ပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်၏အခမဲ့ setup ကိုသုံးပါနှင့်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ပေါ်မှာပိုက်ဆံဖြုန်းစရာအကြောင်းမရှိသည်. ကျနော်တို့ခြေလှမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်အပြည့်အဝညွှန်ကြားချက်များနှင့်ခြေလှမ်းနှင့်အတူသင်ပေးထားသောပြီ, ပဲသူတို့ကိုအတိုင်းလိုက်နာနှင့်လျော့နည်းအချိန်အတွင်းမှာ wifi hacker က app ကို download, ပျော်မွေ့.
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကို Wi-Fi ကို Password ကို Hack တဲ့ Software များ 2018 အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်?
Wi-Fi Password ကို Hacker ကသင်တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်း hacking ထက်အခြားလိုအပ်အားလုံးလိုအပ်သောဆက်သွယ်မှုများကိုရရှိရန်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျ anycast အသုံးချဖို့မပါဘဲကွန်ယက်ကိုရှေးခယျြနိုငျ. ဒါဟာ keygen နှင့်အတူ activated အချိန်ပြည့်ဖွင့်. ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ algorithms ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်. အခမဲ့ Wi-Fi password ကို hacker က WEP ကိုအသုံးပြုသည်, WPA2 နှင့်လည်းမျိုးစုံစံချိန်စံညွှန်းများ. ဒါဟာအစမှာ dynamic လုံခြုံရေးကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့ပေး.
wifi password ကိုဟက်ကာဆို password ကို hack နိုင်နှင့်၎င်းတို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှု codes တွေကိုချိုးဖျက်နိုင်. အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဝိုင်ဖိုင် password ကိုဟက်ကာဆော့ဖ်ဝဲကိုမည်သည့် wifi ဆက်သွယ်မှု password ကိုဖြတ်တောက်များအတွက်ထူးခြားသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဒါဟာသူ့ရဲ့ password ကိုသိရှိခြင်းမရှိဘဲအခြားမည်သည့်တစ်ဦးချင်းစီ Wi-Fi connection ကိုသုံးစွဲဖို့အပူတပြင်းကြိုးပမ်းဖြစ်ပါသည်. သို့သော်, ဤ အခွအေန နောက်တဖန်မကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်. ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သငျသညျထိထိရောက်ရောက်သင်တို့ပတ်လည်အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ wifi connection ကိုသုံးနိုငျ. wifi အခမဲ့ password ကို hacker ကအကောင်းဆုံး feature ကိုအထောက်အထားကိုလုံခြုံရေးဖြစ်ပါသည်. ဒီ option ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်, သင်သည်လည်းသင်၏အ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုလုံခြုံနိုင်. သင်သည်သင်၏ PC ကွန်ပျူတာလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ၎င်း၏ setting ကို customize နှင့်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာသင်အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ network ကို access ကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်လည်းသင်ပိုင်ရှင်၏လှုပ်ရှားမှုများအပေါ် updates များကိုပေးသည်မသာ. သငျသညျဆက်သွယ်မှုစာရင်းတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လက်ရှိအခိုက်မှာအစာရှောင်မြန်နှုန်းရှိခြင်းသောစနစ်ကိုသုံးနိုင်သည်. သငျသညျလညျးနာမညျကိုစာရင်း၏ရှေ့မှောက်၌ပိတ်ပင်တားဆီးမှု button ကိုပစ္စုပ္ပန်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်၎င်း၏ connection ကိုသုံးပြီးအနေဖြင့်ပိုင်ရှင် hack နိုင်.
WPS ချေမှုန်းရေးပြင်းထန်သော & အက်ကွဲ Key ကိုရရှိနိုင်.
သငျသညျရွေနှင့် ဖိတ်ခေါ်. interface ကိုပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်.
Virus ကိုအခမဲ့ – ဒါဟာကူးစက်အားလုံးမျိုးကနေအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, လုံလုံခြုံခြုံဒေါင်းလုပ်.
WPA, WEP, နှင့် WPA2 မရှိခေတ္တခဏနှင့်အတူမစိုက် hacked နိုင်ပါတယ်.
လွယ်ကူသော Update ကို, ဒါကြောင့်လက်လှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါ update ကိုသဘာဝကျကျပြုမိပါလိမ့်မည်.
ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုလျင်မြန်စွာပြတင်းပေါက်နှင့်စမတ်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအားလုံးကိုအပေါ်ကို run နိုင်ပါတယ်.
ဒါဟာသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုသငျသညျလျင်မြန်စွာယခု cracker hack နိုင်သည်ထက်အခြို့သော Wi-Fi ကိုအချက်ပြမှုများကိုဖမ်းလိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင်သောဖြစ်စေခြင်းငှါ,. သင့်ရဲ့အထောက်အထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်. ဒါဟာထင်ရှားစေမည်မဟုတ်. အဆိုပါလျှို့ဝှက် key ကိုသင့်ရဲ့မူလတန်းဝင်ရောက်ခွင့်အတွက်လောလောဆယ်တွင်; ဝေးသင်မှသာတစ်ဦးကို tick. သငျသညျပိုးကူးစက်မှုဟက်ကာ programming ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲအားဖြင့်သင့် gadget ကသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင်ခြေစိတ်ပူရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ထိုသို့သောအဆငျမပွမှေုရှိခြင်းမပြုလုပ်ပြီးတော့အလေးပေးဖို့ဘာမှမရှိဘူး. သငျသညျဤထုတ်ကုန်၏ရိုးရှင်းသောအသုံးချစေနိုင်.
ထောက်လှမ်းရေး option ကိုနှင့်ဗိုင်းရပ်စ် protected.
proxy ကို Grabber နှင့် Hacking ပိုင်ရှင်အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုသည်.
Hack တိုင်းတတ်နိုင်သမျှဆက်သွယ်မှု (မြတ်သောအကွာအဝေး).
sniffing အသုံးပြုသူ mode ကိုရရှိနိုင် & keygen နှင့်အတူ activated အချိန်ပြည့်.
ဒါဟာသင့်လျော်သောဆက်သွယ်မှုများကိုစစ်ဆေးပြီးနှင့်ထောက်ပံ့ပေး & သည်လည်းမိုဘိုင်းလုံခြုံရေးကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့ပေး.
ဒါဟာ WEP ကိုအသုံးပြု, WPA2 နှင့်ပိုပြီးစံချိန်စံညွှန်းများ, လည်းလုံခြုံရေးနှင့် password ကို codes တွေကိုသားအပေါငျးကြင်နာကိုချိုးဖျက်နိုင်.
WI-Fi Password ကို Hacker က၏အင်္ဂါရပ်များ 2018
သငျသညျထိထိရောက်ရောက်အလွယ်တကူသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်မှာဤ cracker ကိုသုံးနိုင်သည်
အဆိုပါဝိုင်ဖိုင်က Android စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင့်ရဲ့ gadget ကခွဲခြားသတ်မှတ်ဘယ်တော့မှနိုင်.
ဒါဟာလျော့နည်းအချိန်အတွက်အလုပ်မလုပ်နဲ့ password hack ပါလိမ့်မယ်, တနည်း, မိနစ်ပိုင်းအတွင်း.
Wi-Fi ဟက်ကာလိုလားတဲ့ App ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲအခမဲ့နှင့်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်.
ဒါဟာလျော့နည်းအချိန်အတွက်လျှို့ဝှက်စကားလုံးအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့် hack ပါလိမ့်မယ်, တနည်း, မိနစ်အတွင်း၌.
အန်းဒရွိုက် wifi hacker က app ကိုသငျသညျကိုအာမခံပါလိမ့်မယ် 100% ရလဒ်.
သငျသညျခငျြအဖြစ်သငျသညျမြားစှာသောကွန်ရက်များအဖြစ်ကျော် hack နိုင်. ဒါဟာအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ထားပါတယ်.
ဒါကြောင့်လူအစုအဝေးအနေဖြင့်အသေးစားနှင့်အခမဲ့အဖြစ် Tool ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုတာရာအရပ်ကိုမယူပါလိမ့်မယ်
သင် hack ချင်တဲ့ device ကိုရွေးနိုင်သည်ထက်ဒါဟာသင်အသုံးပြုသူစာရင်းကိုပြပါလိမ့်မယ်
သင်ကသူတို့ကို piece ရန်လိုအပ်ပါတယ်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်လည်းကွဲပြားခြားနားသောစတုရန်း clients များလုပ်နိုင်.
သငျသညျလုံခြုံရေးနှင့် Wi-Fi ပိုင်ရှင်အာမခံသင့်ရဲ့ device ကို detect ဘယ်တော့မှနိုင်.
ဒါဟာသင်လုံခြုံရေးသေချာသည် – သငျသညျအဖြစ်တာနဲ့ကြာမြင့်စွာသင်လိုအပ်အဖြစ်ကို web access ကိုရှိသည်နိုင်.
အခြားလူများအရာတစ်ခုခုကို download လုပ်ပါလိမ့်မယ်လာသောအခါ၎င်းသည်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်; သင်၏ system ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ဆောင်စေခြင်း.
သင်လိုအပ်သကဲ့သို့သင်တို့စနစ်များ၏တူညီသောအရေအတွက်ကျော်က hack နိုင်. ဒါဟာ Android ပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ထားပါတယ်.
သင်ရွေးချယ်ထားသောပြီးတာနဲ့, အ cracker ကိုယ်တိုင်ကလုံခြုံရေး breakout နှင့်စကားဝှက်ဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်.
သငျသညျ wifi hacker က app ကို download, သငျသညျလိုအ gadget ကရှေးခယျြနိုငျထက်ဒါဟာသင်ဖို့ဖောက်သည်များ၏ rundown သရုပ်ပြလိမ့်မည်.
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, ဒါကြောင့်မည်သည့်ပြဿနာနှင့်အခက်အခဲမရှိဘဲရွေ့လျားနေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်၏သေချာအောင်နိုင်အောင်ကကြိုးမဲ့များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို examine
မှတ်စု: Wi-Fi ဟက်ကာများ 2018 အားလုံး Operating System နဲ့ devices များနှင့်သဟဇာတ. သငျသညျမဆိုဟာ android ဖုန်းပေါ်မှာအသုံးပွုနိုငျ. တချို့ကတိကျတဲ့စနစ်ကလိုအပ်ချက်တွေကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်.
Wifi Hacker များအတွက်စနစ်လိုအပ်ချက်များ 2018
များအတွက်လိုအပ်သော wifi hacker က app ကိုအခမဲ့ download 100% ရလဒ်.
Wi-Fi သီးသန့် Password ကို Hacker က 2018.rar file ကို install
က Copy ကူးပြီးနောက် '' wifi Hacker.exe’ Crack ဖိုင်တွဲ မှစ..
Software များပုံမှန်ထဲသို့ကြောင့် Paste device အတွက် Directory ကို Install.
ဒါကတကပျော်မွေ့င် Wi-Fi ဟက်ကာဆော့ဖ်ဝဲကို.
WIFI Password ကို Hacker က Download 2018 – Wi-Fi ကို Password ကို Hack တဲ့ Tool ကို
WIFI Password ကို Hacker က 2018
Wi-Fi ဟက်ကာများ 2018 Wi-Fi hack နှင့်အသုံးပြုမှုအောင်က၎င်း၏လျှို့ဝှက် password ကိုချိုးဖျက်ဖို့အသုံးပြုနှငျ့သငျနိုင်စွမ်းသောနောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်. မိုဘိုင်းအတွက် wifi password ကိုဟက်ကာဆော့ဖ်ဝဲကိုအခမဲ့ download သင်တို့အဘို့အပွင့်လင်းသောမည်သည့် Wi-Fi အသင်းအဖွဲ့မှသင်တို့အဘို့အပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏.
← AVG 2.3.1 ကားမောင်းသူ Updater ကို Cracked Reimage PC ကိုပြုပြင်ခြင်း 2018 →
Fredericka Appro	ဒီဇင်ဘာလ 22, 2016
မင်္ဂလာပါ, admin ရဲ့ !! ငါနေ့တိုင်းသင့်ရဲ့ website မှာဖတ်နှင့်ငါသည်သင်တို့ကိုဤအရပ်၌အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဟုပြောရပါမည်.
Wance Lee က	ဒီဇင်ဘာလ 26, 2016
Lora Wood က	ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2017
ကိုယ့်ကိုသင့် WIFI Password ကို Hacker ကကြည့်ခဲ့ 2017 – Wi-Fi ကိုစကားဝှက်ကိုဟက်ကာဆော့ဖ်ဝဲကို Download လုပ်ငါ့အသက်ကိုလွယ်ကူသောလုပ်. ငါသည်လည်းကိုရှာနေပါတယ် 8 ဘောလုံးကိုရေကူးကန် hack က. သင်တို့အဘို့အ၎င်း၏လွယ်ကူလျှင် ASAP ကို ​​update ကျေးဇူးပြုပြီး.
ရောဘတ် Howard	ဧပြီလ 21, 2017
မင်္ဂလာပါ Anastasiya Libra, တဖန်ငါ wifi hacker ကသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်. ငါ bookmark ကယ့်ငါ.